सामुदायिकको गुणस्तर खस्कँदो | Educationpati.com
२०७५ माघ २१ गते १०:०७मा प्रकाशित
उदयपुर । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनानुदिन खस्किरहेको छ । १२ विद्यार्थीलाई ४ शिक्षक हुँदा पनि कटारी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएको विद्यालय निरीक्षक कुमार पोखरेलले बताए ।
शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नहुँदा उपलब्धि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । कटारी नगरपालिका क्षेत्रका धपर, खोक्सा, बैरेनीलगायत झन्डै दर्जन विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या धेरै छन् । तर पनि विद्यार्थीलाई सामान्य क, ख, ग समेत नबुझ्ने पाइएको सम्बद्ध शिक्षा अधिकारी बताउँछन् ।
थोरै विद्यार्थी, त्यसैको अनुपातमा धेरै शिक्षक हुँदा पनि उपलव्धि नै चिन्ताजनक हुनु भनेको शिक्षामा सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । शिक्षक धेरै र विद्यार्थी थोरै हुँदा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । त्यसैअनुसार विद्यालयले सिकाइ उपलव्धिमा शतप्रतिशत हुनुपर्ने थियो । तर त्यसको ठीक उल्टो पाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाले सामान्य लेखपढ गर्न समेत नसक्ने अवस्था छ । तिनीहरूको भविष्य के होला ? चिन्ताको विषय रहेको सम्बद्ध अधिकारीले गुनासो गरेका छन् । विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी होस् भनेर नै विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । तर विद्यालयको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कनु र सिकाइमै त्रुटि उपलव्धि नक्कली हुनु भनेको विद्यालय शिक्षक चरम लापरवाही रहेको नगरपालिकको शिक्षा हेर्ने शाखाले जनाएको छ ।
शिक्षा नियमवालीमा एक शिक्षक बराबर ४५ विद्यार्थी तोकिएको छ । तर १२ विद्यार्थी सख्या रहेको विद्यायलमा ४ शिक्षक हुँदा समेत शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नहुनु दुर्भाग्य हो । ‘शिक्षक शिक्षण सिकाइप्रति प्रतिबद्धता होइन, जागिरका लागि जागिर मात्रै खाइरहेका छन्,’ कटारी नगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति सूर्य कार्कीले भने, ‘शिक्षकको जागिर भनेको पढाउने हो, उसले त्यसका लागि सवैभन्दा पहिले कक्षा कोठामा रहेका विद्यार्थीको सिकाइ र त्यसबाट आउने उपलव्धि हेर्नुपर्छ ।’ तर कतिपय विद्यालयका शिक्षक ती कुराको वास्तै नगरी शिक्षण सिकाइ गरिरहेकाले समस्या आएको उनले बताए ।
शिक्षण सिकाइसँगै परीक्षा प्रणालीमा समेत त्रुटि रहेको छ । विद्यालयमा भएको शिक्षण सिकाइका आधारमा परीक्षण लिनुपर्ने हो । तर शिक्षकहरूको व्यावसायिक संस्था शिक्षक महासंघले तय गरेको परीक्षा प्रणाली र प्रश्नपत्रका आधारमा परीक्षा लिने गर्दा त्यसमा समेत त्रुटि भएको स्रोत व्यक्ति कार्कीले बताए । ‘शिक्षक महासंघले जिल्लाभरिका विद्यालयको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र तयार गर्ने गरेको छ,’ स्रोत व्यक्ति कार्कीले भने, ‘महासंघले पाठ्यक्रममा तोकेका आधारमा वार्षिक परीक्षाअनुसार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षाको प्रश्न पत्र तयार गरेर विद्यालय पठाउने गरेको छ ।’
तर विद्यालयमा महासंघले तयार गरेको प्रश्नपत्रअनुसार पढाइ नै नगरेपछि कसरी परीक्षा दिने ? उनले बताए । विद्यालयमा पढाइ भएकै हुँदैन । तर महासंघले पाठ्यक्रममा तोकेको पाठअनुसार प्रश्नपत्र तयार गरेर पठाउँदा पढाइ नभएका विद्यार्थीले त्यसलाइ छोडेर परीक्षा दिने गर्दछन् । तर पछि नतिजा सार्वजनिक गर्दा महासंघले पठाएको प्रश्नपत्रका आधारमा गरिन्छ । त्यसले गर्दा विद्यालयले पढाएको पाठको परीक्षा नभई महासंघले तोकेका आधारमा गरिएको परीक्षा हुँदा उपलव्धि नक्कली हुने गरेको स्रोत व्यक्ति कार्कीले बताए ।
यता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भए पनि नआउने र आए पनि पूरै समय नबस्ने समस्या भएको देवि प्राथमिक विद्यालय कटारी नगरपालिका ४ बैरेनीका प्रधानाध्यापक अरुणा तामाङले बताइन् । ‘विद्यार्थी भर्ना संख्या ३५ भन्दा बढी छ तर सधैं १२ देखि १८ जना विद्यार्थी मात्रै आउने गरेका छन् ।’ प्रधानाध्यापक तामाङले भनिन्, ‘पिछडिएको स्थान र पिछडिएको समुदायको बसोबास भएकाले पनि विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् ।’
विद्यार्थी ३५, शिक्षक दरबन्दी ४ र १ कार्यालय सहयोगी समेत ५ जना विद्यालयमा कार्यरत रहेको उनले बताइन् । देवि प्रावि विद्यालय भवन, शौचालय, सरसफाइ रहे पनि विद्यार्थी थोरै भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष तेजबहादुर मगरले बताए । ‘विद्यार्थी संख्या नभए पनि शिक्षकको संख्या चाहिँ छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार सबै छ, विद्यार्थी थोरै छन् ।’ विद्यालयमा पिउने पानीको अभाव मात्रै रहेको उनले बताए ।
कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा धेरै विद्यालयमा समस्या भएको विद्यालय निरीक्षक पोखरेलले बकताए । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी बढी छन् । ‘विद्यार्थी संख्या थोरै तर शिक्षक दरबन्दी धेरै भएका विद्यालयमा पनि पढाइको अवस्था खस्किएको छ,’ विद्यालय निरीक्षक पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहलाई दरबन्दी मिलान गर्ने र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन ।’ त्यसैले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा समस्या सृजना भएको उनले बताए । नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा प्रयत्नरत रहेको नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
‘तर स्थानीय तहलाई शिक्षाका लागि दिइएको अधिकार नै पर्याप्त छैन,’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘विद्यालयमा पढाइ भएन, त्यसको दोष शिक्षकलाई गयो भने ती शिक्षकलाई कारबाही गर्नेसम्म स्थानीय तहलाई अधिकार छैन ।’ नगरको समग्र शिक्षाको मूल्यांकन, पुरस्कार, कारबाही सहितको अधिकार नहुँदा शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्न समस्या भएको उनले बताए । कटारी नगरपालिकमा ८४ सामुदायिक विद्यालय छन् ।
डिल्लीराम खतिवडाले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।